May 12, 2021 - Cele Fans
May 12, 2021 Cele Fans Comments Off on လမျးပျေါမှာ ဆိုငျကယျဦးထုပျ ခထြားခွငျးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို သငျသိပါသလား..?
ဒီရဲ့သင်္ကေတဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ဆိုင်ကယ်မောင်းနင်သူတွေ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ Biker Code ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ I need your help အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ် လို့ရည်ညွှန်းပါတယ် ဘီးပေါက်တဲ့အခါမျိုး၊စက်ချို့ယွင်းတဲ့အချိန်၊ ဆီကုန်တဲ့အချိန်၊ Accident ဖြစ်တဲ့အချိန် အစရှိတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အကူအညီတောင်းခံလို့ရပါတယ် တစ်လှေတည်းစီးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ခရီးသွား မိတ်ဆွေအချင်းအချင်း လမ်းမပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် (Helmet) လေးမြင်ပါကရပ်ပြီးတော့ အကူအညီပေးကြပါခင်ဗျာ။ တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ ကိုယ်လည်း အကူအညီ လိုအပ်တဲ့သူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (Ko […]
အိမျမှာ ကပျထားရငျ ကပျရောဂါ ဘေးကွီးကနေ ကငျးဝေးလိမျ့မယျ ယုံကွညျပါတယျ
May 12, 2021 Cele Fans Comments Off on အိမျမှာ ကပျထားရငျ ကပျရောဂါ ဘေးကွီးကနေ ကငျးဝေးလိမျ့မယျ ယုံကွညျပါတယျ
အိမ်မှာ ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေးလိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ..ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကင်းဝေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…. ရှေးရှေးတုန်းကလည်း ကျောက်ရောဂါ..ပုလိပ်ရောဂါ.. ဝမ်းရောဂါ အစရှိသဖြင့် ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်…။ တရွာလုံး ရွာလုံးကျွတ် ကူးကုန်ပြီးလူတွေ အကုန်သေကြသတဲ့.. လူတွေသေတော့ မကောင်းဆိုးရွားတွေ ပျော်တာပေါ့.. သူတို့တွေ ပျော်မြူးပြီး ရွာတွေထဲ ဝင်လာကြသတဲ့.. ရွာတွေ ထဲက လူတချို့လည်း တခြားလွတ်ရာ […]
May 12, 2021 Cele Fans Comments Off on ရတေျော၅မြိုး နှငျ့ ဆကျကပျခွငျး အကြိုး
ရတေျော၅မြိုး နှငျ့ ဆကျကပျခွငျး အကြိုး ရတေျော(၅)မြိုး ဆိုသညျမှာ ၁။ မကျြနှာသဈတျောရေ ၂။ သောကျတျောရေ ၃။ သုံးတျောမူရေ ၄။ ခြိုးတျောရေ ၅။ ခွဆေေးတျောရေ ရတေျော (၅)မြိုးကို ဆကျကပျ လှူဒါနျးခွငျး၏ အကြိုးရလဒျမြားမှာ – ဘဝ မှာ အေးခမျြးမှူတှေ ရရှိခွငျး ၊ အလုပျကိုငျ အကွံအစညျ မှနျသမြှ ထမွောကျအောငျမွငျခွငျး ၊ စိ တျခမျြးသာ […]